isku xira korontada, qalabka isku soo biiray wareeggeedii korontada (oo mararka qaarkood loo yaqaan dekedaha, gelanayo, ama interfaces). Waxaan leenahay Xidhiidhiyayaasha of nooc oo dhan, oo ay ku jiraan D-hoosaadka, fiber optic, baabuurta, wareeg ah, audio iyo video, RF, isgaarsiinta, awood, iyo USB. Waxa kale oo aanu qaadi xulashada badan oo boosteejada isku xira iyo blocks terminal, iyo sidoo kale backshells iyo accessories ee noocyada oo dhan.
isku xira 1.25T
15EDG isku xira
2EDG isku xira
isku xira Audio
isku xira AV
BNC isku xira
Booth isku xira
CH isku xira
Isku xira D-hoosaadka
DC isku xira
Dupont isku xira
DVI isku xira
cuneyso isku xira
qoyska isku xira
Header isku xira
KF2510 isku xira
Isku xira USB Micro
Isku xira Fiber indhaha
isku xira PH
PS2 isku xira
RJ11 isku xira
RJ22 isku xira
RJ45 isku xira
Terminal Block isku xira
Nooca-C USB isku xira
VH isku xira
Wire isku xira
XH isku xira
ZH isku xira
XIDA Electronics dukaan xulashada weyn ee chips xasuusta, kaararka, iyo modules xasuusta gaar ah codsi kasta, oo ay ku jiraan chips ROM iyo RAM iyo chips DRAM kala duwan kasta, kaararka Flash, FIFO, modules xasuusta iyo ka badan.
Sort by awoodda, width baska xogta, waqti helaan, danab hawlgalka, baakadaha, count pin oo dheeraad ah. Raadi waxyaabaha xusuusta, waayo, noocyo kala duwan oo nooc interface iyo akhriyo dalabaadka hawlgal / qortaa, oo ay ku jiraan qaybaha xusuusta Patriots. Waxaan oolin waxyaabaha xusuusta ku haboon server, Kombuyuutarada shakhsi, codsiyada la deggan yahay, ganacsiga iyo warshadaha, iyo in ka badan.
qalabka macquulka Programmable
A qalabka macquulka programmable (PLD) waa qayb elektaroonik ah loo isticmaalo si ay u dhisaan wareeggeedii digital reconfigurable. Si ka duwan iridda macquulka ah, taas oo uu leeyahay shaqo go'an, PLD uu leeyahay shaqo ah undefined ee wakhtigii warshadda lagu sameeyay. Ka hor inta PLD waxaa loo isticmaali karaa in wareeg ah waa in la qorsheeyay, waa in, waxay beddeshay.
4000 Taxanaha Logic Chip
74 Taxanaha Logic Chip
Wareeggeedii Power Management Integrated
wareeggeedii maamulka Power dhafan (ICS maamulka awood ama PMICs ama PMU sida unit) waa wareeggeedii isku dhafan (ama block nidaam in qalab nidaam-on-a-jab a) ee maaraynta shuruudaha awooda nidaamka ciidanka. Sayidka PMIC loola jeedaa tiro balaadhan oo ah chips, si kastaba ha ahaatee inta badan waxaa ka mid ah nooc ka mid ah diinta xoog elektaroonik ah iyo / ama hawlaha gacanta awoodda la xiriira. PMIC A waxaa inta badan ka mid ah qalabka batariga ku shaqeeya sida telefoonada gacanta iyo ciyaartoyda warbaahinta la qaadi karo si loo yareeyo xaddiga meel bannaan oo loo baahan yahay.
Toosan Xukumaha Chip
Mase Power Management Chip
Danab Tixraaca Chip
Chip An analog waa set oo ah wareeggeedii analog electronic Ghadafi aasaasay on gabal hal wax Semiconductor.
The danab iyo hadda at dhibcood cayiman ee dawaaf ee chips analog kala duwan si joogto ah waqti. Taas bedelkeeda, chips digital oo kaliya isticmaalaan iyo in la abuuro voltages ama hadda heer Discrete, oo aan lahayn qiimaha dhexe. Waxa intaa dheer in Transistors, chips analog inta badan waxay leeyihiin tiro badan oo xubno ka dadban (Inductor / Capacitors / Resistors) ka badan chips digital caadi ah samayn. Inductors u muuqdaan in laga fogaadaa sababtoo ah size waaweyn, iyo transistor iyo capacitor wada shuqulka inductor ah samayn karo. (Marka habkan waxaa loo isticmaalaa in CFL a, oo aad ka heli waaya'aragnimo elektarooniga ah.)
Chips Analog kaloo ku jiri kara xubno ka macquulka ah digital si ay ugu bedesho hawlaha analog qaar ka mid ah, ama ay u oggolaadaan chip si ay ula microprocessor a xiriiraan. Sababtan awgeed iyo tan iyo macquulka ah waxaa badanaa loo hirgeliyey iyadoo la isticmaalayo technology CMOSka, chips, kuwaas oo ay isticmaalaan hababka BiCMOS shirkadaha sida Freescale, Texas qalabku, STMicroelectronics iyo kuwa kale. Tan waxaa loo yaqaan processing signal isku dhafan ah oo kuu ogolaanaya naqshadeeye ah in lagu kordhiyo hawlaha badan oo jab ah. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka ka mid ah ilaalinta load, qaybo ka mid hoos u tirin iyo isku halaynta sare.
Chips analog daahir processing macluumaadka ayaa la inta badan la bedelay chips digital. Chips Analog ayaa weli loo baahan yahay calaamadaha wideband on account of shuruudaha heerka sampling, codsiyada awood sare iyo interfaces transducer ah. Cilmi-baarista iyo warshadaha oo duurka ku sii wadaan in ay koraan oo ay barwaaqoobaan. Qaar ka mid ah chips analog muddo dheer jiray oo si fiican u yaqaan waa 741 kordhiyo ka Hawleed, iyo 555 saacadda.
Chips Koronto ayaa sidoo kale loo arkaa in ay chips analog. Ay ujeedada ugu weyn waa in ay soo saaraan wax soo saarka saad danab si fiican u nidaamiyo for chips kale ee nidaamka. Tan iyo dhammaan nidaamada elektaroonigga ah waxay u baahan yihiin korontada, habka korontada PMICs yihiin xubno muhiim ah oo ka nidaamyada kuwa.
Hadda Monitor Chip
In korontada iyo injineernimada korontada, qarxiye ah uu yahay qalab ammaanka korontada ka shaqeeya si ay u bixiyaan in ka badan ilaalinta ee hadda Bannaanka koronto. Its qayb muhiim u yahay silig bir ama strip in dhalaalayaa marka aad u badan hadda socodka dhex, oon ku joojiyeen hadda. Waa qalab nicmoolayda, mar fiyuuska ah ayaa ku shaqeeya waa wareeg furan, iyo waa in la bedelay ama rewired, taas oo ku xidhan nooca.
Fiyuusyada loo adeegsaday qalabka badbaadada lagama maarmaan ah oo ka soo maalmaha hore ee injineernimada korontada. Maanta waxaa jira kumanaan naqshado fiyuuska kala duwan kaas oo ay leeyihiin ratings gaar ah hadda iyo danab, jebinta jeer awooda iyo wax ka qabashada, taas oo ku xidhan codsiga. Waqtiga iyo sifooyinka hawlgalka hadda fiyuusyada la doortay si ay u bixiyaan ilaalin ku filan oo aan la dhexgelin loo baahnayn. Xeerarka taararka sida caadiga ah u qeexaan rating ah fiyuuska hadda ugu badan ee wareeggeedii gaar ah. Wareeggeedii Gaaban, Xammuul, xamuulka aaddanayn, ama qalab failure yihiin sababaha Ra'iisul hawlgalka fiyuuska.
Fiyuuska A waa hab automatic awoodda ka nidaam khaldan ka saareen, inta badan soo gaabiyaa xayeysiis (Automatic jarida of Supply). Mawjadaha Circuit waxaa loo isticmaali karaa sida xal design kale fiyuusyada, laakiinse uu lahaado sifooyinka si weyn u kala duwan.
Circuit fara baxsadeen
Clip fiyuuska / Kursiga
Glass Tube Fiyuus
Toosan koronto Fiyuus
Dhulku Mount Fiyuus
Audio Wajahadda Chip
Wireless isugu gudbiyo-heli Chip
Sammeecado / toosan Devices
kordhiyo waa qalab elektaroonik ah in kordhisaa Ilodanimada inayan ee signal koronto. Waxay waxaa loo kala saaraa in loo eego awoodda ay si wax ku ool xoojin labada danab ama signal la gelin hadda. kordhiyo danab A Eebehay wuxuu calaamadaha danab talooyinka iyo soo saarta danab a saarka waaweyn. Sammeecado hadda, sidoo kale loo yaqaan Sammeecado transimpedance, dareemi hadda ee taabbagalinta, iyo wax soo saarka danab a si load ah. Transconductance iyo Transresistance Sammeecado isku bedelasho saamayn this - danab aqbasho ama hadda soo saartaa wax soo saarka ah ee hadda ka weyn ama danab siday u kala horreeyaan.
Mid ka mid ah dhimaya waxqabadka ugu muhiimsan ee kordhiyo waa ay linearity, ama awoodda ay si sax ah u matalaan talooyin la signalka qaab isku mid ah in domain markii wax soo saarka ah. xuduudaheedu kale waxqabadka muhiimka ah waxaa ka mid ah heerka ku laayeen, jawaab inta jeer, buuq, iyo bandwidth faa'iido.
Sammeecado waxaa loo kala saaraa A, AB, B, C, D iyo E. fasalka ayaa ka dhigan xaddiga kala duwanaansho signal saarka ah leedahay in ka badan hal wareeg haddii aqbasho waa waveform a sinusoidal. toosan The more kordhiyo waa, hoose saarka dhalanrog. Class A waa ugu toosan iyo fasalka C yahay ugu yaraan ku toosan. Class C ma ku haboon yahay codsiyada audio iyo sida caadiga ah waxaa loo isticmaalaa in waxyaabaha sida laliska RF. Fasallada D iyo E yihiin bedesheen Sammeecado in isticmaali karaa marxaladaha circuit saarka ka kooban resonators harmonic, Beddelashada badan rail sahayda, farsamooyinka wax soo saarka sharfo, iyo PWM iyo Delta-li'idiisa isbedbeddelka in la kordhiyo tayada iyo dib waveform talooyin ah ee wax soo saarka.
Kordhiyo Input FET
Kordhiyo Hawleed Guud
Xawaaraha Sare Band Wide kordhiyo Hawleed
Instrumentation kordhiyo Hawleed
Low-Sawaxanka kordhiyo Hawleed
Low-Power kordhiyo Hawleed
Sax kordhiyo Hawleed
Keyswitch A waa nooc ka mid ah biiro yar loo isticmaalo furayaasha on teebabka. Kuwaas oo hadda waa inta badan ka mid ah ay sabab u tahay isticmaalka ugu teebabka casri ah oo isticmaalaya waraaqaha caag la xiriir iyaga on
biiro Key sidoo kale loo isticmaalaa in lagu qeexo biiro shaqeeya by fure, inta badan loo isticmaalaa in wareeggeedii alarm tuug. Suuroggalaan baabuur A sidoo kale waa is beddel ah oo noocan ah.
Relays waa daaro korontada oo la actuated karo by signal koronto halkii by gacanta furitaanka ama ku dhow biiro. signal Tani yar u dhaqmo sidii Gaadh-haye ah signal a aad u balaaran korontada. Awoodda in ay gacanta ku low-xukunta signal-awood sare waa waxa iyaga ka dhigaa qaybaha korontada sida caan ah.
Transistors ku jira hindisooyin saddex-terminal in la samayn karaa qaab-cirifoodka Isgoyska (BJT), ama in ka badan caadi ahaan sida complimentary bir-xabagta-Semiconductor (CMOSka). Waxaa loo abuuray by la jaarka ah nooca n-iyo semiconductors nooca-p ee labada PNP ama qaabeynta NPN. Sida caadiga ah danab a waxaa laga codsadaa in terminal iridda ah jidaynayey hadda ay u soo baxaan iyada oo qalab halkaas oo hawlaha transistor ka mid ah in ay ku biiro. Waxay waxaa loo isticmaalaa in nidaam digital si ay u hirgeliyaan irdaha macquulka ah iyo xogta lagu kaydiyo. wareeggeedii Analog u isticmaalaan si ay u abuuraan Sammeecado iyo oscillators.
diode A waa qalab laba-terminal jirta nooca p-meel kasta iyo nooca n-semiconductors waxaa si toos ah xigay in kasta oo kale. Dalbashada danab wanaagsan in anode ma soo saari doontaa hadda wax la taaban karo ilaa danab marinka diode ee la dhaafo. Marka danab marinkii la dhaafo hadda waxaa loo ogolaan doonaa in ay socdaan Wabiyaalkii ka anode si cathode laakiin diode ku xiri doonta socodka hadda ka cathode si anode hoostiisa xaaladaha ugu. Waxay waxaa loo isticmaalaa in gudbiyeyaasha AC-DC, idaacadaha, dheecaan (ESD) wareeggeedii electro-guurto ah, sida ilo iftiin, iwm
Diode danab Sare
Waxaan leenahay resistors ee dhammaan codsiyada oo ay ku jiraan dusha hal Buur, godka iyada oo loo marayo hal, laambadihii, potentiometers iyo rheostats, iyo sidoo kale noocyo kala duwan oo xirmooyinka, shabakadaha iyo Arrays, iyo accessories kale.
resistor A waa qayb ka mid dadban korontada xadideysa ama dejisa socodka hadda korontada iyada oo wareeg ah. hadda waxaa lagu xisaabiyaa via sharciga Ohm ee: V = IR. qiimaha Resistance, dulqaad, iyo mararka qaar xitaa Wehliyaha heerkulka la go'aamin karaa by reading code midabka, tilmaamay by taxane ah oo guutooyin midab dhinaca qayb ka.
Resistors waxaa loo isticmaali karaa in la xadido socodka hadda marayo diode ah iyo si uu u joojiyo line gudbinta iyo hortago shakhi. Laba waxaa loo isticmaali karaa si ay u abuuraan qaybiye danab in ay soo saartaa saami danab saarka ah qiyamka iska caabin ah. A talooyin guud-Ujeedada / wax soo saarka (GPIO) transceiver yeelan karaan oo ay wax soo saarka dhigay by weyn jiido-up ama resistor jiid-down la markii ay GPIO uu noqdo mid firfircoon.
Resistors waxaa la abuuray isticmaalaya noocyo kala duwan oo qalab, oo ay ku jiraan kooban carbon, film carbon, film bir, iyo nabarka silig. korantada Consumer u baahan iyaga u noqon yar oo sax ah, halka codsiyada warshadaha iyaga u baahan karaan in ay awood u soo guraysay xaddi badan oo awoodda, si ay aakhirka isagoo ka weyn.
Resistor hagaajin karo
Hadda Ogaanshuhu Resistor
Saarida koronto Direct
LED Siraaj Resistor
Birta Glaze Resistor
Birta Oxide Film Resistor
Macdan Film Resistor
Dhayida Ultra hooseeyo Resistance Resistor
Sax Resistance hagaajin karo
Khafiif ah Film qiray Chip Resistor
Wire Resistor Qoonka
Qaylo / Afhayeenka / MIC
Qaylo A ama beeper waa qalab seylaanyenta audio, kaas oo waxaa laga yaabaa in farsamo, korontada, ama piezoelectric (piezo soo gaabiyo). Isticmaalka caadiga ah ee buzzers iyo beepers ka mid ah aaladaha alaarmiga, shidda, iyo xaqiiqaynta aqbasho user sida click mouse ama keystroke.
Guddoomiyaha waa qalab korontada soo saarta dhawaaqa. Waxaa ka mid ah afhayeenka Computer, afhayeenka Digital, samaacad Electrostatic, afhayeenka Full-duwan, Horn samaacad, samaacad, samaacad Magnetostatic iyo wixii la mid ah.
Makarafoonka waa Converter tamarta ah in badasha calaamadaha dhawaaqa galay signallo koronto.
Batteriga korontada waa qalab ka kooban hal ama in ka badan unugyada electrochemical la xiriir dibadda siiyo qalabka korontada xoogga sida tooshashka, casriga ah, iyo baabuur koronto.
Baytariyada yimaadaan qaabab iyo qiyaaso badan, ka unugyada Ghadafi loo isticmaalo in ay awoodda qalabka iyo wristwatches maqlay in unugyada yaryar, khafiif ah loo isticmaalo ee casriga ah, si ay u baytariyo acid hogaanka u ballaaran loo isticmaalo in baabuurta iyo baabuur, iyo xad dhaaf ah ugu weyn, bangiyada weyn batari size ee qolalka in ay bixiyaan heegan ama awoodda degdegga ah is dhaafsi telefoonka iyo xarumaha xogta computer.
Battery Box / Battery saldhig
Capacitors waa qayb ka mid dadban korontada la laba boosteejada in kaydiso tamarta electromagnetic qaab duurka koronto. Boosteejada ku xiran yihiin laba birood tabinta in ay leeyihiin wax dielectric u dhaxeeya. Waxay ku kaydiso lacag koronto ku tumeen sidii ay tabinta. Taargooyinka eedeeyay kala waxyaabaha la dielectric abuuro beerta koronto.
Capacitance waa dhimaya ah capacitor ah in muujinaysaa cadadka lacag koronto ku kaydsan for danab a siiyey codsatay in boosteejada ay. Waxaa lagu qiyaasay in farads (F). Tusaale ahaan, laban laabmay capacitance labanlaab kaydin doona korontada, (waayo, danab a siiyey joogto ah ee boosteejada).
Capacitors waxaa lagu tilmaamay inay ku salaysan qalabka jirka isticmaalo kaari saddex lakab dhismeedka kaari dielectric. Tusaale ahaan, kuwa la bir qalabka elektrolytka dielectric waxaa lagu magacaabaa capacitors electrolytic; biraha bir dhoobada waxaa lagu magacaabaa capacitors dhoobada, iwm Kuwii waa non-fog laga yaabaa in lagugu xiro sidoo kale in ay danab togan ama taban. Haddii ay kala fog waa in ay la xiran danab wanaagsan, la terminal wanaagsan la xusaa baakada.
Capacitor danab Sare
Capacitor Ceramic mabda'a
Capacitor Electrolytic adag
Oscillator crystal A waa circuit oscillator elektaroonik ah in uu isticmaalaa resonance farsamo Quruurado ah birqaya ee wax piezoelectric si ay u abuuraan signal koronto la soo noqnoqoshada ah saxda ah. Inta jeer Tani waxaa inta badan loo isticmaalaa in wakhtiga ula socoto, sida in wristwatches quartz, si ay u bixiyaan signal saacad deggan, waayo, wareeggeedii dhafan digital, iyo si loo xasiliyo mawjadaha for laliska idaacadda oo qaata. Nooca ugu badan ee resonator piezoelectric isticmaalo waa crystal quartz ah, si wareeggeedii oscillator daraysa iyaga noqday yaqaan oscillators crystal, laakiin qalabka kale ee piezoelectric oo ay ku jiraan dhoobada polycrystalline waxaa loo isticmaalaa in wareeggeedii la mid ah.
Oscillator crystal A, gaar ahaan mid ka mid ah crystal quartz dhigay, ka shaqeeya by lagu margado by beerta korontada marka danab waxaa laga codsadaa in ay koronto u dhow ama baraf. Hantida waxaa loo yaqaan electrostriction ama piezoelectricity bedelka. Marka berrinka laga saaro, quartz - oo oscillates in inta jeer ee saxda ah - abuuraa beerta korontada sida soo laabtay ay qaab hore, iyo tan ay abuuri karaan danab a. Natiijadu waxay tahay in crystal quartz ah u dhaqmo sida circuit RLC ah.
Kiristaalo quartz waxaa soo saaray for mawjadaha ka dhowr tobanaan kilohertz boqolaal megahertz. In ka badan laba bilyan oo kiristaalo waxaa soo saaray sanad walba. Inta badan waxaa loo isticmaalaa qalabka macaamiisha sida wristwatches, saacadaha, idaacadaha, kombiyuutarada, iyo telefoonnadii. Kiristaalo quartz ayaa sidoo kale laga helay gudaha qalabka baaritaanka iyo cabbirka, sida counters, matoorrada signal, iyo oscilloscopes.
Dhululubada Crystal oscillator
Dhayida Active Crystal oscillator
Dhayida dadban Crystal oscillator
Inductors / kuul magnetic / gudbiyeyaasha
inductor An, sidoo kale loo yaqaan gariiradda, ceejiya ama nuclear, waa dadban qayb laba-terminal korontada kaydiya tamarta duurka a magnetic marka hadda korontada socodka dhex. inductor An caadi ahaan ka kooban yahay ah boogta silig ku dahaaran galay gariiradda ku hareeraysan muhiimka ah a.
kuul magnetic waxaa loogu talagalay si loo xakameeyo buuqa hirka sare iyo kororka faragelinta on khadadka signal, fiilooyinka korantada, iyo sidoo kale nuugo karsado electrostatic. kuul magnetic waxaa loo isticmaalaa si uu u nuugo calaamadaha UHF, sida qaar ka mid ah wareeggeedii RF, PLL, wareeggeedii oscillating, iyo wareeggeedii aalladda xasuusta hirka sare (DDRSDRAM, RAMBUS, iwm), taas oo u baahan in lagu daro kuul magnetic in ay ka qayb talooyin ah ee korontada ah. kuusha magnetic ayaa resistivity sare iyo permeability, taas oo u dhiganta iska caabin ah isku midka ah iyo inductance, laakiin qiimaha caabiga iyo qiimaha inductance kala duwan la soo noqnoqoshada.
Gudbiyeyaasha fudud jira laba inductors la xigay is xoog leh u dhaxeeya. gudbiyeyaasha Tallaabada-hoos loo yareeyo danab ka il la gelin awood u leeyahay inuu Ilodanimada ah in uu yahay khatar yar iyo sidoo kale ka badan oo wax ku ool ah in ganacsiga iyo qoysaska. gudbiyeyaasha Tallaabada-up la kordhiyo danab ee gudbinta ku ool ah ka badan masaafo dheer ee khadadka korontada. Gudbiyeyaasha laga maarmaanka u ah qaybinta awoodda AC.
Chip kuusha magnetic
Ceejiya Mode Common
Kuusha magnetic Direct
Inductor Frequency Low
Alaabtii oo Mitir
XIDA korantada waxaa ka go'an in ay macaamiisha siiyaan dunida oo dheeraad ah oo kala duwan aan xad lahayn more cusub oo la alaabta technology kharash-ool ah. waxaan si guul bilaabay in ay suuqa caalamiga ah ee multimeter digital, instrumentation baabuurta, qalabka baaritaanka korontada, ilaalinta deegaanka iyo instrumentation falanqaynta kaamerada, instrumentation ammaanka, inaad ahaatid guud, cabiraada iyo dhaqmaan alaabtii oo oscilloscopes kaydinta digital iyo 10 kale oo tiro balaadhan oo ah qaybaha ugu weyn ee alaabta, oo ay sii wadaan si ay u sameeyaan taxanaha ah ee wax soo saarka kala duwan, oo si buuxda u daboolaan baahiyaha gaarka ah ee macaamiisha kala duwan.
Circuit raadiyayaal fara baxsadeen
Tools Imtixaanka Qeybta
DC Sahayda Power
Mitir Digital haysa
Digital Kaydinta Oscilloscopes
Tijaabiyeyaal Rakibaadda korontada
Tools Power korontada
Xararad Digital Kaydinta Oscilloscopes
Mitir Industrial Digital haysa
Layout iyo Cabbiraad Tools
Danab iyo Socota tijaabiyeyaal
Dab dhaliyaha Waveform
Dareemayaal guud ahaan ka mid ah kuwa soo socda afar qaybood galay:
shidma cadaadis A caadi ahaan cabiraya cadaadis of gaaska ama cabitaanno ah. Waxay ku shaqeeyaan by guud ahaan signal elektaroonik ah iyada oo sababtu tahay cadaadiska ahbaa sida function ka mid ah ciidanka in loo baahan yahay in ay joojiyaan dareere ama gaaska ka ballaariyo. Dareemayaal cadaadis ayaa sidoo kale inta badan loo yaqaan transducers cadaadis, laliska cadaadis, piezometers iyo tilmaamayaasha cadaadis, ka mid ah magacyada kale. Waxaa caadi ahaan loo isticmaalo in codsiyada xakameynta iyo la socodka.
Codsiga iyo Jago dareemayaal
mooshin A iyo shidma meel u oggolaanaysa in cabbirka ee booska, sidoo kale marka la eego buuxda (shidma booska buuxda), ama marka la eego qaraabo (qaraabo ama barakaca shidma). Codsiga ama meel dareemayaal cabbiri kartaa jagada toosan ee qalab (shidma booska toosan), isbedel booska angular, iyo sidoo kale dhidibka multi-meel isbedel. Ka mid ah kuwa ugu caansan ee loo isticmaalo in wearables iyo qalabka Xararad IoT waa accelerometer iyo tignoolaji dareemayaal.
dareemayaal indhaha loogu badalo iftiin ka ifaysa, ama isbedel iftiinka, galay signal elektaroonik ah in uu yahay akhrin karo by qalab. Dareemayaal Kuwanu, sidoo kale loo yaqaan dareemayaal photoelectric, ka dibna ay awoodaan si loo ogaado jiritaanka iyo joogitaanka mawqifyada shay. Dareemayaal indhaha waxaa loo isticmaalaa in kala duwan ee codsiyada qalabaynta warshadaha iyo sidoo kale wax soo saarka ganacsiga. Ka mid ah kuwa ugu caansan yihiin dareemayaal fiber optic, dareemayaal u dhow, iyo dareemayaal daah iftiin ammaanka.
dareemayaal kaamerada ku jira hindisooyin in ay soo saaraan signal koronto jawaab u heerkulka ama isbeddel ah ee heerkulka. Iyagu waa muhiim codsiyada warshadaha oo u baahan feeback si ay u ilaaliyaan ah kala duwan oo aan fiicnayn hawlgalka heerkulka. Wixii akhrin badan-kulka ka dibna waxay keeni kartaa in xiritaanka ee mishiinka in la kordhiyo nolosha iyo joogtaynta jawi shaqo oo ammaan. Labada nooc ee ugu weyn dareemayaal kaamerada waa dareemayaal heerkulka iyo dareemayaal qoyaan.
Daarmayaay'e Light sensor
Drivers waa war laliska heegan ah. Waxaa loo filaayo in wadista qoyska ama isgaarsiinta caadiga ah technology gaar ah iyo fududeeyo design ee nidaamka ka weyn by fulinta oo dhan hab-maamuus ku habboon iyo shuruudaha korontada. Tusaale ahaan, darawal ah oo LED offloads baahidii sare il / waaskada hadda ka processor / GPIOs AP oo u gal qayb darawalka. qaybaha interface ku jiri kara wadayaasha iyo qaateyaasha (transceivers), kuwaas oo ka kooban wejiyo badan oo loo isticmaali karo in ay hirgeliyaan shabakad xiriir oo u dhaqmaan sida repeaters.
Darawalka Sare ee hadda
Chips durugsan gundhig
-Time Real Clock Chip
In korontada, an opto-isolator, sidoo kale loo yaqaannaa optocoupler, photocoupler, ama isolator indhaha, waa qayb ka mid in ku wareejinaya signallo koronto u dhaxaysa laba wareeggeedii go'doon adigoo isticmaalaya light.Opto-isolators hortago voltages sare ka waxyeela habdhiska helo signal.Commercially la heli karo opto-isolators adkeysan aqbasho-to-saarka voltages ilaa 10 transients danab kVand la xawaare ilaa 25 kV / μs.
nooca A caadiga ah ee opto-isolator ka kooban yahay LED iyo phototransistor ah in xirmo isku Doolaal. Noocyada kale ee isku il-shidma ka mid ah LED-photodiode, LED-LASCR, iyo lammaane ilayska photoresistor. Sida caadiga ah opto-isolators kala iibsiga digital (on-off) calaamadaha, laakiin farsamooyinka qaar ka mid ah oggolaan in la isticmaalo iyadoo calaamadaha analog.
Dioska- bixinaya laydh isticmaali technology nalalka adag-state in ay soo saaraan iftiinka iyada oo arrin adag, muhiimad Semiconductor ah. Tani waxay marka laga reebo iyaga oo dhigaya oo laga helay ilo kale oo fudud sida nalalka incandescent (iyada oo vacuum a) ama nalalka dhaadheer ee isafgaradka (iyada oo gaaska). hab ay aasaasiga ah ee wax soo saarka iftiin waddaa on recombination Band-to-Band ama shucaaca.
Optocoupler toos ah la geliyo
LED Digital Tubooyinka